गोविन्द केसीका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका भोला रिजालको अस्पतालले विरामीको लियो ज्यान ! – YesKathmandu.com
सोमबार १०, साउन २०७३
ओम नर्सिङ होमले सामान्य रोगको विरामीलाई गलत औषधी विरामीको प्राण लिएको छ । विगत १४ दिनदेखी अनसनरत डा गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीका अधिकारीहरु बीच वार्ता हुदै गर्दा डा भोला रिजालको ओम अस्पतालमा गलत औषधी दिएका कारण विरामीको ज्यान गएको भन्दै आन्दोलन र तोडफोड भइरहेको थियो ।
डा गोविन्द केसीका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका डा भोला रिजालको अस्पतालमा लार्पावाहीका कारण एक विरामीको ज्यान गएको छ ।विरामीलाई औषधीको सट्टामा विष खुवाए पछि एउटा समान्य रोगीको प्राण गएको छ ।
विरामीलाई यसरी गलत औषधी खुवाउने रेडिओटेक्नोलोजिस्ट अमरनाथ महतो हुन । उनी विगत पाँच् वर्षदेखि ओम नर्सिङ अस्पतालमा कार्यरत छन । नजाने उनले कति विरामीलाई यसैगरी गलत औषधी खुवाएर तिनको विल्लीवाठ पारिसकेका होलान ।
धादिङबेशीमा चीया पसल चलाउँदै आएकी २९ वर्षिय सुष्मा अधिकारी सामान्य खुट्टा झमझमाउने समस्या लिएर शिक्षण अस्पताल पुगेकी थिईन ।त्यहाँका डाक्टरहरुले पैसाकै प्रलोभनमा परी ओम नर्सिङ होममा रिफर गरे। शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले सिटिस्क्यान गर्नुपर्ने भन्दै चावहिल स्थित ओम अस्पतालमा रिफर गरेका थिए ।
तीन वटा सन्तानकी आमा सुष्मा ११ महिनाको दुधे बालकलाई काखी च्यापेरै अस्पताल पुगिन विहानै आठ बजे । यो आइतवारको घटना हो । उनको सिटिस्क्यान भयो । सिटिस्क्यानपछि रेडिओटेक्नोलोजिस्ट अमरनाथ महतोले औषधी खुवाए तर, औषधी खाएको केही मिनेटमै उनको स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर मात्रै बनेन, केही क्षणमै उनको मृत्यु भयो ।
मृतकका आफन्तका अनुसार सिटिस्क्यान गरेको आधा घण्टामै सुष्माको मृत्यु भएको थियो । चिकित्सकले लापरबाही गरेको भन्दै आईतबार मध्येरातसम्म मृतकका आफन्तले अस्पताल परिसरमा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । मृतकका श्रीमान लालबहादुर अधिकारी नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन ।
अस्पतालको लापारबाहीले ११ महिने बालिकाको मात्रै होईन अन्य दुई नाबालकहरुको भविष्य समेत अन्यौलमा परेको छ ।
अस्पताल भन्छ : त्रुटी भयो
अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै मृतकका आफन्तले अस्पताल परिसरमा आन्दोलन गरेका थिए । दिनभरको आन्दोलन हुँदा समेत अस्पताल प्रशासनले कुनै सुनुवाई गरेको थिएन । तर, आन्दोलने हिंसात्मक रुप लिन थालेपछि भने अस्पताल प्रशासन आफ्नो गल्ति स्विकार्न बाध्य भएको थियो ।
अस्पताल प्रशासनले आफूहरुको ऋुटी भएको स्विकार्दै मृतकका परिवारको बालबालीकाको शिक्षा दिक्षाको लागि २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने मौखिक वचन दिएको छ । यद्धपी लिखित सम्झौता भने भइसकेको छैन ।
प्रचण्डले भनेः प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई साँच्चिकै राजनेता हुनुहुँदो रहेछ
कोइरालको निधनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपूरणीय क्षतिः एमाले
नेपालको आन्तरिक मामिला दिल्लीको बजारमा लिलाम !
यात्रृबहाक बसमा पेट्रोल बम प्रहार, बन्दका कारण पश्चिम नेपालको जनजिवन प्रभावित
सवारी दुर्घटनामा प्रहरी जवानसहित दुईजनाको मृत्यु